उपेन्द्र खड्का | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता उपेन्द्र खड्का
सञ्चालक, पाथफाइण्डर साइक्लिङ
”आधिकारिक विक्रेताका रुपमा कारोबार गर्ने हामी मात्र हौं” –
कुनकुन ब्राण्डका साइकल विक्रीवितरण गर्नुहुन्छ ?
हामीले ट्रेक, गाइण्ट, भिटेक, क्युब ब्राण्डका साइकल विक्रीवितरण गर्दै आएका छौं । यसमा सबैभन्दा सस्तो ट्रेक ब्राण्डको साइकल हो । ट्रेक अमेरिकन कम्पनीको चीन र ताइवानमा उत्पादन हुने ब्राण्ड हो । हामीले पाथ फाइण्डर साइक्लिङलाई सन् २००६ देखि सञ्चालनमा ल्याएका हौं । त्यसयता निरन्तर साइकलको विक्रीवितरण गर्दै आएका छौं । अहिले विशेष गरी क्युब ब्राण्डको साइकल बढी विक्री भइरहेको छ । क्युब जर्मन ब्राण्डको साइकल हो । यसका सबै उत्पादन तयारी अवस्थामा आउँछन् । तर, अन्य ब्राण्डका साइकलको फिटिङ नेपालमै हुन्छ ।
वार्षिक कति परिमाणमा विक्रीवितरण गर्नुहुन्छ ?
हामीले गएको वर्ष३ सय थान साइकल विक्री गरेका थियौं । यो वर्षसाइकलको विक्री बढ्ने अनुमान छ । गएको वर्षमा ट्रेक ब्राण्डका साइकल बढी विक्री भएका थिए । केही महँगो भए पनि यस वर्षक्युब ब्राण्डका साइकलको विक्री बढ्ने अनुमान छ ।
साइकल प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढेको हो ?
अहिले नेपालीहरूमा पनि साइकल प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने धारणाको विकास भएको छ । एशियन गेम्स सकिएलगत्तै नेपालमा साइकलको विक्री बढेको पाइन्छ । फिटनेशका लागि पनि साइकल प्रयोग गर्नु राम्रो मानिन्छ । यसले वातावरण स्वस्थ राख्न पनि टेवा दिन्छ । मोटरसाइकलभन्दा सस्तो र हलुका भएकाले पनि साइकलको विक्री बढेको हो । विक्री बढेकाले हामीले पोखरामा पनि शाखा विस्तार गरेका छौं । काठमाडौंपछि सबैभन्दा बढी साइकल विक्री हुने पोखरा हो । यहाँ प्रायः महँगा साइकल विक्री हुन्छन् । २ वर्षअघिसम्म पोखरामा साइकल विक्री गर्नेको सङ्ख्या दुइ मात्र थियो । अहिले बढेर यसको सङ्ख्या दर्जनको हाराहारीमा पुगेको छ ।
कति मूल्यसम्मका साइकल विक्री गर्नुहुन्छ ?
हामीले विक्री गर्ने सबैभन्दा सस्तो साइकल ४९ हजार रूपैयाँसम्मको छ । यो अमेरिकन ‘ट्रेक’ ब्राण्डको साइकल हो । तर, यसको उत्पादन चीन र थाइल्याण्डमा हुन्छ । बढीमा अहिले ३ लाख ५ हजार रुपैयाँसम्मका साइकलको विक्रीवितरण गर्र्छौं । ‘क्युब’ ब्राण्डको ‘डाउन हिल’ साइकलको प्रतिगोटा ३ लाख ५ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । नेपालमा ब्राण्डेड साइकल भारतबाट आउँदैन । ग्राहकको अर्डरअनुसार हामी १० लाख रुपैयाँसम्मका साइकल पनि उपलब्ध गराउन सक्छौं ।
सामान्यतः एउटा साइकलको आयु कति हुन्छ ?
ब्राण्डेड साइकललाई कम्तीमा १० वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, बीचबीचमा मर्मतसम्भार गर्नुपर्छ । ननब्राण्डेडको चाहिँ अनुमान गर्न सकिँदैन । हामीले सबै ब्राण्डेड साइकल मात्र विक्रीवितरण गर्र्छौं । गएको वर्ष सबैभन्दा बढी ‘ट्रेक’ ब्राण्डको साइकल विक्री भएको थियो । राम्रो र भरपर्दो भएकाले अहिले भने ग्राहकहरू ‘क्युब’ ब्राण्डको साइकलप्रति आकर्षित हुन थालेका छन् । यसमा हामीले २ वर्षको वारेण्टी दिने गरेका छौं ।
विभिन्न ब्राण्डका साइकलको आधिकारिक विक्रेता तोकिएको हुँदैन ?
हामीबाहेक नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पनि कम्पनी कुनै ब्राण्डको आधिकारिक विक्रेता भएका छैनन् । नेपालमा आधिकारिक रूपमा साइकलको कारोबार गर्ने हामी मात्र हौं । गएको ६ महीनाअघि जर्मन ब्राण्ड क्युब साइकलको आधिकारिक विक्रेता लिएका छौं । नेपालमा अधिकांश साइकल होलसेलबाट आउँछन् । यहाँ एक किसिमले साइकलको व्यावसायिक विक्रीवितरण हुन सकेको छैन । नेपालमा आधिकारिक विक्रेता दिन कम्पनीहरूले गाह्रो मान्छन् ।
नेपालमा वार्षिक कति परिमाणमा साइकल विक्री हुन्छ ?
यसको आधिकारिक तथ्याङ्क छैन । हाम्रो अनुमानमा ब्राण्डेड साइकल मात्र वाषिर्क २ हजार थान विक्री हुन्छ । यस्ता ब्राण्डेड साइकल सस्तोमा २२ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मका पाउन सकिन्छ । सबै गरी वार्षिक १० हजार थानभन्दा बढी साइकल विक्रीवितरण हुन्छन् । हामीले आठ स्पीडभन्दा कम गियरका साइकल विक्री गर्दैनौं । सबैभन्दा बढी १० स्पीडसम्मका गियर भएका साइकल उपलब्ध छन् । हामीकहाँ उपलब्ध साइकल प्रोफेशनल चालकले २ घण्टा १० मिनेटमा ५० किलोमिटरसम्म गुडाएका छन् । हामीले वक्री गर्ने सबै गियर भएको साइकल मात्र हो । हामीले ग्राहकको अर्डरआनुसार साइकल उपलब्ध गराउने गरेका छौं । रकम बुझाएको एक घण्टाभित्र सम्बन्धित कम्पनीले हाम्रो सामान पठाउँछ । तर, यी सामान नेपालमा आउन कम्तिमा एक हप्ता लाग्छ । हामीले विक्री गर्ने सबै साइकल त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिने गर्छ ।
साइकलको मूल्य कुन आधारमा निर्धारण गरिन्छ ?
हामीलाई सम्बन्धित कम्पनीले निश्चित मूल्यमा साइकल उपलब्ध गराउँछ । भन्सारदर, सम्बन्धित कम्पनीको मूल्य र हामीले पाउने कमिशनलाई आधार मानेर खुद्रा मूल्य निर्धारण गरिन्छ । जुनसुकै व्यवसायीले विक्रीवितरण गरे पनि मूल्यमा तलमाथि हुँदैन ।
नेपालमा साइकल बन्दैन ?
हामीलाई थाहा भएसम्म नेपालमा साइकल बन्दैन । नेपाली बजारमा उपलब्ध सबै ननब्राण्डेड साइकल चीन र भारतबाट आउँछन् । यहाँ साइकल बनाउने सम्भावना भने छ । खपतको दर बढ्यो भने निर्माण पनि शुरू हन्छ । नेपालमा साइकलको कच्चापदार्थ पाइँदैन । साइकलको ट्युब र तार दुवै यहाँ उत्पादन हुँदैनन् । नेपालमा भारत, जर्मन र थाइल्याण्डका तार आइरहेका छन् ।
तपाईंहरूले टूरको आयोजना पनि गर्नुभएको छ कि ?
साइकलको व्यापारबाहेक हामीले विभिन्न समयमा टूर सञ्चालन गर्दै आएका छौं । ल्हासा?काठमाडौँ , अन्नपूर्ण , लोमाङथाङजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रमा यस्ता टूर सञ्चालन गर्र्छौं । टूरबाट मात्र वार्षिक १२ लाख रुपैयाँ जतिको कारोबार हुन्छ ।
साइकल व्यवसायले आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ ?
साइकलको विक्रीवितरण गरेर आत्मनिर्भर बन्न सकिँदैन । यो ठूलो आम्दानी हुने क्षेत्र पनि होइन । मोटरसाइकलजस्तो साइकलको विक्रीमा फाइदा हुँदैन । हामीले विक्री गर्ने साइकलका आवश्यक स्पेयरपार्ट्स् पनि उपलब्ध गराउँछौं । हामी साइकल भाडामा पनि लगाउँछौं । १ लाख रुपैयाँको साइकललाई २० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । हामीले काठमाडौंमा करीब ५० प्रतिशत साइकल विक्रीवितरण गर्र्छौं । बाँकी सिक्किमबाट पनि पनि विक्री गर्दै आएका छौं । अहिले भारतभन्दा नेपालमा राम्रो साइकल पाइन्छ ।